Sidee guriga looga ilaaliyaa qabowga jiilaalka? | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
caloolxumo | | Dhaqaalaha Guriga
Mar kasta oo xilliga jiilaalka soo dhawaado, wakhtiga qabowga iyo heerkulka hooseeya ayaa yimaada. Wax tilmaamaya isbeddel ku yimi habka caadiga ah ee dadka gudaha iyo dibadda guriga. Waxaan ka soo bilownay joogitaanka barxad ilaa daawashada filim fadhiga fadhiga. Oo si sax ah halkan waa xirmada su'aasha, tan iyo Waxaa jira waqtiyo aynaan helin heerkulka saxda ah si aan u ilaalino guriga. Sababtan awgeed, waxaanu ku siin doonaa talooyin ay tahay inaad ku xisaabtanto si aad wakhtigan gurigaaga uga ilaaliso qabowga.
Waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca waa alaabta guriga lagu dhisay. Sidaa darteed, dahaarka saqafka iyo darbiyada ee leh agabyo kala duwan sida guf, suuf dib loo warshadeeyay, xumbo buufis ah iyo xitaa fiberglass ayaa muhiimad gaar ah leh.
Qodob kale oo muhiim ah waa daaqadaha. Si looga hortago in qabowgu ka soo galo iyaga, waxaa lagama maarmaan ah in daaqadaha ay yihiin kuwo tayo sare leh. Haddii kale, walxaha qaarkood waa in la isticmaalo. Tusaale ahaan, dhig silikoon ku wareegsan qaabka daaqadda si aad uga hortagto in qabowgu soo galo ama aad xumbo dhex dhigto daaqadda lafteeda iyo darbiga dhismaha si aad u xidho dildilaaca.
Waa inaad sidoo kale ku dabooshaa godka ay sanduuqyada indhoolayaasha ku leeyihiin cajalad dahaadh ah sababtoo ah, haddii kale, hawadu waxay u soo galaysaa sidii iyadoo aan berri jirin.
Qodobbada kale ee yimaada marka guriga la dahaaraynayo waa:
nooca guryaha: dabaqa koowaad, guri guri, duplex ama chalet
cabbirka guriga, taas oo ah, mitirka laba jibbaaran ee ay leedahay
goobta guriga, taas oo ah, haddii ay ku taal geesta dhismaha ama haddii uu jiro dhismo ku xiga
Alaabta, roogagyada, iyo daahyada ayaa sidoo kale caawiya in ay dahaariyaan guriga. Way caddahay in haddii gurigu cusub yahay oo aan weli labisan walxaha qurxinta noocan oo kale ah, heerkulku wuu yaraan doonaa. Inkasta oo taasi ay sidoo kale ku xirnaan doonto nooca kuleyliyaha guriga, wax aan inta badan ka walwalno wax badan haddii ay dhacdo inaan awoodno kaydi biilka dhamaadka bisha. La mid ma aha haddii ay tahay habka kuleylka dhexe kaas oo xoogga kulaylka la samayn doono saacadaha uu shidmay. Si kastaba ha ahaatee, haddii nidaamka uu yahay mid qoysku gaar u yahay, qoys walba ayaa noqon doona kan dooranaya heerkulka ugu fiican gurigooda iyo wakhtiga ugu wanaagsan ee magdhow u ah inay shidiyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Dhaqaalaha Guriga » Sidee guriga looga ilaaliyaa qabowga jiilaalka?